जीतबहादुर मोदीको चर्चा कमाउने स्टन्ट,किन ढाट्दैछन् मोदीले नेपालीलाई ? | EuropeNepal.Net
जीतबहादुर मोदीको चर्चा कमाउने स्टन्ट,किन ढाट्दैछन् मोदीले नेपालीलाई ?
Europe Nepal Monday, August 4, 2014
Prime Minister Narendra Modi in Nepal just getting more popular stunt to get popularity through Jeet Bdr.
जीतबहादुर मोदीको चर्चा कमाउने स्टन्ट मात्र
किन ढाट्दैछन् मोदीले नेपालीलाई ?
Prime Minister Narendra Modi Nepal as parliament's expression of how the truth, he may not do the whole clan to his own place, but Jit Magar of Nepal to supervise the case, he has received the information. Prime enthusiastic jitabahadulai his hacking infancy and the first time his parents had kept explain to the public were going. Welcome to this course of action and accolades were all his. Prosecutors and their families met Monday corruption rijensima opts to broadcast all of the media initiative.
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणको क्रममा व्यवस्थापिका संसदमा दिएको अभिव्यक्ति कति सत्य हो, त्यो पुरा होला नहोला आफ्नै ठाउँमा छ तर जितबहादुर सारु मगरको हकमा उनले नेपाल जनतालाई ढाँटेको खबर प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले नै आफ्नो ट्वीटरमा जितबहादुलाई सानैदेखि आफूसँग राखेको र पहिलो पटक उसको आमाबाबुलाई बुझाउन गइरहेको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । उनको यस कदमलाई सबैले स्वागत र वाहवाही गरेका थिए । सोमबार राजधानीको हायात रिजेन्सीमा जीतबहादुर र उनको परिवारसँग भेट गराएको कुरा सबै मिडियाले प्राथमिकतासाथ प्रशारण पनि गरे ।
तर, वास्तवमा जीतबहादुरले यसअघि पनि दुई पटक आफ्ना परिवारसँग भेटिसकेका छन् । भारतकै एकजना बुद्धिजीवी विनोद मेहताले आफ्नो ट्वीटरमार्फत एक फोटो सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाई ‘फ्रड’ भनेका छन् ।
सार्वजनिक गरिएको फोटोमा जितबहादुर केही वर्ष पहिले आफ्ना परिवारसँग भेटेको र सामुहिक तस्विर खिचाएको छ । फोटोमा दाजु, भाउजु, भतिजा भतिजी र आमाका साथमा मुस्कुराउँदै छन् । जवकि प्रधानमन्त्री मोदीले पहिलो पटक उसको परिवारलाई भेट्दैछन् भनि दावी गरेका छन् । मोदीको भनाई र यो फोटोले नेपाली जनतालाई शंकाको घेरामा राखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाईमा प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा चर्चा र भावनात्मक वाहवाही पाउनका लागि जितबहादुरलाई प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । दुई तीनवर्ष अगाडि आफ्ना परिवारसँग भेटी सकेका जितबहादुर १६ वर्षपछि पहिलो पटक भेट्दैछन् किन भन्छन् होला ।
नवलपरासीका एक पत्रकारले दुई तीनवर्षअघिदेखि उनको खोजी भइरहेका थिए तर जितबहादुर आफ्नो परिवारलाई भेटेकी भेटेन त्यो थाह नभएको बताए । शंका गर्ने ठाउँ एउटा अर्को पनि रहेको छ । जितबहादुरलाई कुनै पनि कुरा सोध्दा साहब (मोदी) सँग सोधेर मात्र भन्ने प्रतिकृया दिँदै आएका छन् । २७ वर्षीय जितबहादुर १० वर्षकै उमेर आफ्ना दाजु दशरथको साथमा मजदुरीका लागि भारत गएका थिए । दाइसँग मजदुर काम गरिरहेका जितबहादुर आफ्ना दाइसँग घर फर्केनन्, उतै हराए । एकजना महिलाको मध्यमबाट नरेन्द्र मोदीको सम्पर्कमा गए ।
त्यसबेलादेखि हालसम्म परिवारको सम्पर्कमा नआएको दावी प्रधानमन्त्री मोदीको रहेको छ । जितबहादुरका परिवारका साथ काठमाडौ आएका रामचन्द्र धितालका अनुसार २०५५ सालमा भारत गएयता जितबहादुर दुईपटक आफ्ना परिवारसँग नेपाल आएर भेटीसकेका छन् । उद्योगपति विनोद चौधरीको प्रयासमा खोजि कार्यभएपछि पहिलो पटक २०६८ सालमा नेपाल आएर आफ्ना परिवारसँग एक महिनासम्म बसेका थिए ।
दोस्रो पटक २०६९ सालको तिहारमा आएर टिका लगाएर फर्केका थिए । सोही बेला आएको बेला परिवारसँग सामूहकि तस्विर खिचाएको स्रोतको दावी छ । यसअघि दुई पटक जितबहादुर आफ्ना परिवारलाई भेटेपनि नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सामुन्नेमा उनको आमालाई भेट गराएको पहिलो पटक रहेको धितालको दावी छ । भारतीय दुतावासको सहयोगमा नवलपरासीबाट आफ्नो छोरालाई भेटन् काठमाडौ जितबहादुरका परिवार जितवहादुरका परिवार ह्यात होटलमा बसिरहेका छन् ।
स्मरण रहोस्, बेलायतका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको क्रममा बीच बाटोमा गाडी रोकेर बाटो छेउमा राखेको पसलबाट केही खाएका थिए । उनको यस कार्यले उनले भारतमा वाहवाही तथा भारतीय नेताहरुले अलोचना सहनु परेको थियो । तर, पछि त्यो केवल पब्लिसिटी स्टन्ट मात्र रहेको प्रमाणित भएको थियो ।
EuropeNepal.Net: जीतबहादुर मोदीको चर्चा कमाउने स्टन्ट,किन ढाट्दैछन् मोदीले नेपालीलाई ?